In kabadan 50-kamida saraakiisha & madaxdii mamulkii Dumay ee Cabdi iley oo Xamar laga daabulayo. – Xeernews24
In kabadan 50-kamida saraakiisha & madaxdii mamulkii Dumay ee Cabdi iley oo Xamar laga daabulayo.
21. Dezember 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Magaalada Muqdisho waxaa Gaadhay masuuliyiintii ugu badnayd ee katirsanaa mamulkii Cabdi iley oo isugu Jira saraakiishii Hay’adaha Amniga Kililka oo ay ugu badan yihiin kuwii ciidanka Liyuuga wasiiro iyo xubno kale oo kamid ahaa mamulkii Cabdi iley.
Xogtani oo ay nasoo Gaadhsiiyeen ilo xog Ogaala oo katirsan Hay’adaha Amniga ee magalada Muqdisho oo Qayb ahaan shakhsiyaadkaasi arinkooda lasocda, ayaa sheegay in Kooxdani Horay uga Tirsanaa mamulkii Kililka oo si Habqan ah kugalay Gobolada Somaaliya, gaar ahaan Somaliland, Puntland, Galmudug, ilaa Konfur Galbed ay haatan Muqdisho kusugan yihiin intooda badan inta Hadhayna lasugayo maalmaha inagu soo Fooleh.
Sida Xogtu sheegayso waxaa Kooxdan Lacago badan kaqaatay Agaasimaha Laanta socdaalka ee dawlada Somaaliya, Maxamed Aden Koofi oo Baasaboorka Somaaliga ah usoo saaray kuwa Haatan Xamar kusugan, kuwaasi oo isku diyaarinaya inay u baqoolaan dhinaca dalka Turkiga oo ay Qorshaynayaan inay xaga Yurub uga sii Tahriibaan.
Xogtu waxaa ay intaa kudaraysaa in Kooxdani baxsadka ah dhaq-dhaqaaqooda siwayn looga dareemayo magalada Muqdisho, marka laga yimaado Taliyaha Laanta socdaalka waxaa Kooxdani Lashaqaynaya ama ay Gacan kahelayaan masuuliyiin katirsan dawlada Somaaliya oo ay kamid yihiin saraakiil ciidan xilibaano iyo xubno kale oo muhiima.
Kooxdani baxsadka ah oo intooda badan Hargaysa u Qaxay markii Hore ayaa waxaa Xamar usoo wareejiyay iskuna xidhay iyaga Koofi iyo xubnaha kale ee Lashaqaynaya milkiilaha Telefeshinka Universal Eng. Axmed Abuukar oo xidhiidh wanaagsan kala dhexeeyay Kooxda Cabdi iley oo dhinaca dacaayada uu u Qaabilsanaa.
Sida xogtu sheegayso Horinta ugu Horaysa ee kooxdan ayaa lagu wadaa inay kaduulaan magalada Muqdisho maalinta Isniinta ah ee 24-ka bishan, waxayna ku wajahan yihiin magalada Stanbuul ee dalka Turkiga halkaasi oo Qorshuhu yahay bal marka Hore inay salka dhigaan, kadibna uga sii Talaabaan dhinaca Bariga Yurub oo ay Rajanayaan inay Yurubta Galbeed si taxriib ah uga sii Gudbaan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/12/cago0.2.jpg 356 678 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-12-21 10:38:052018-12-21 10:38:05In kabadan 50-kamida saraakiisha & madaxdii mamulkii Dumay ee Cabdi iley oo Xamar laga daabulayo.
Baarlamaanta itoobiya oo ansixiyey sharciga xuduudaha iyo aqoonsiga! Daawo Dadwaynahii daganaadii Dhuunyar iyo Daymeed ee Cabdi Iley Canfarta ku...